किन खाने टुसायुक्त गेडागुडी ? – Khabar Silo
गेडागुडीलाई टुसा उमारेर खाँदा मानव स्वास्थ्यलाई चाहिने आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रामा पाउन सकिन्छ ।
स्वस्थ रहन र सन्तुलित खानाका लागि ‘टुसा उमारेको’ गेडागुडी उपयुक्त मानिन्छ। यसमा पर्याप्त पोसिलो तथा सस्तो र केही मिसिवट नहुने हुँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्छ ।
टुसा उमार्नु भनेको भिटामिन उद्योग नै घरमा खोल्नु जत्तिकै हुने चिकित्सक बताउँछन् । इन्धन वा पैसा खर्च नगरेरै खानेकुराको उपादेयतामा वृद्धि गर्न तथा अन्न तथा गेडागुडीमा रहेको खाद्य तत्वको पोषणमा वृद्धि गर्नका लागि टुसा उमोरर खान सकिन्छ ।
सर्वप्रथम अन्न वा गेडागुडीलाई भाँडोमा राखेर राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ । ४–५ पटक पखालेपछि धुलो, ढुंगा आदि हट्छन् । यसपछि भिज्न पुग्ने पानीमा डुबाएर त्यसलाई राख्नुपर्छ । तीन चरणमा गेडागुडीको टुसा उम्रन्छ ।
पहिलो चरणमा गेडागुडीलाई भिजाउने । दोस्रो चरणमा भिजाएको गेडागुडी अंकुरित हुन थाल्छ । अन्न वा गेडागुडीको दाना फुटेर टुसा निस्कन्छ । यो टुसा आएपछि दानाको गुणहरूमा धेरै सकारात्मक परिर्वतन आउँछन् ।
तेस्रो चरणमा दोस्रो चरणमा अंकुराएको बिउबाट निस्केको टुसा बढ्दै जान्छ । बिउमा रहेको पोषकपदार्थ उपयोग गर्दै टुसा बढ्छ र यसमा पोषण पनि बढ्दै जान्छ ।
टुसायुक्त खानाको फाइदा
टुसा उमारेको अन्न वा गेडागुडीमा पहिले भइरहेका पोषकतत्वमा पनि धेरै कुरा थपिन्छ । जुनसुकै उमेर, लिंग, समूहका मानिसले खाद्यान्नमा आफैँ टुसा उमार्न र प्रयोग गर्न सक्छन् । यसले हाम्रो शरीरमा पोषण दिन्छ । यो पूर्ण, सस्तो र बलवर्धक खाना हो ।
– यसले बूढो हुने गति मन्द पार्नुका साथै मानिसलाई सुन्दर, स्वस्थ र रोगमुक्त बनाउँछ ।
– हरियो तरकारीजत्तिकै फाइदाजनक हुन्छ ।
तनाव नलिनुस्, आँखा कमजोर हुन्छ !
विश्वकप क्रिकेट हुँदैछ । आफूले समर्थन गरेको देशले हार्दा वा आशा अनुरुप प्रदर्शन नगर्दा तनाव लिने बानी तपाईंको पनि हुनसक्छ ।तर, यस्तो कुरामा तनाव नलिन वैज्ञानिकहरुले सुझाएका छन् । जर्मनीको म्यान्डबर्ग विश्वविद्यालयमा गरिएको अध्ययन अनुसार लामो समयसम्म तनाव लिँदा अटोनोमिक नर्भस सिस्टम असुन्तलित हुन्छ र आँखाका नशामा समस्या हुन थाल्छ । तनावका कारण लामो समयसम्म […]
बिगार्ला है सुन्दरता, गर्भ रोक्ने औषधिले….
Posted on September 26, 2021 Author khabar silo
अनुहारमा आउने दागधब्बा, चायाँपोतो र डन्डिफोरको कारण बढ्दो उमेर मान्ने गरिन्छ । बारम्बार एउटै गल्ती गर्ने कारण पनि डन्डिफोरको समस्या आउने गर्छ । डन्डिफोर र अनुहारमा आउने अन्य समस्याको कारण तनाव, गलत खानपान, मेकअप र वायु प्रदुषण मान्ने गरिन्छ । तर, यसको अर्को सबैभन्दा ठूलो कारण गर्भ निरोधक औषधि हो । गर्भ रहनबाट बच्नका लागि […]
Posted on August 2, 2021 Author khabar silo
महिनावरी हुँदा पेट दुख्ने समस्या बाट छुटराका पाउने यी घरेलु उपाय, पढ्नुहाेस् र सेयर गर्नुहाेस् । जब हामी स्वस्थ हुन्छौँ, तब मात्र जीवनमा खुसी, मिल्छ, काम गर्न मन लाग्छ र जीवनलाई सफल रुपमा स्थापित गर्न सक्छौँ तर जीवन नै सफल भएन भने हाम्रो जीवन नै असफल बनिदिन सक्छ। म-हिनावारी हुँदा पेट देख्ने समस्या आम नारीको […]